Ahmed Cali Salaad: Waxaan wax ka qabanayaa arimaha caafimaadka | Somaliska
Ahmed Cali Salaad oo ka tirsan xisbiga Socialdemokraterna (S) ayaa doorashii bishii hore kursi ka helay maamulka gobolka Stockholm, isagoo safka musharaxiinta xisbiga kaga jiray nambarka 22-aad. Ahmed Cali Salaad ayaa taageero aad u badan ka helay dadka ku nool Tensta/Rinkeby isagoo noqday qofka labaad ee ugu cododka badan xisbiga Socialka ee Stockholm.
Wareysi uu siiyay wargeyska Dagens Nyheter (DN) ayuu ku sheegay in uusan samayn olole weyn oo doorasho balse dadku ugu codeeyeen maadaama uu yahay nin si fiican looga yaqaano deegaanka isla markaana uu ka tirsan yahay jaaliyado badan. Cali Salaad ayaa sidoo kale u sharaxnaa baarlamaanka (Riksdagen) balse ma uusan helin codod ku filan.
Cali Salaad ayaa sheegay in uu ka shaqaynayo horumarinta adeegyada caafimaadka ee deegaanka ay ku noolyihiin soo galootiga. Isagoo intaas ku daray in uu doonayo daryeel caafimaad oo sinaansho ku dhisan. “Macquul ma ahan in dhaqtarku uu 10 daqiiqo keliya siiso reer dhan oo caafimaad soo doontay”.
Maamulka gobolka (Stockholms läns landsting) ayaa qaabilsan arimaha caafimaadka, gaadiidka dadweynaha iyo qaorsheynka gobolka. Cali Salaad ayaa ku rajo weyn in uu saameyn ku yeesho maamulka gobolka Stockholm.
Telefishinka Sweden oo dacaayad siiyay Ayaan Hirsi Ali